Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada XFS oo si diiran loogu soo dhaweeyey Garoowe+Sawirro – Radio Muqdisho
Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada XFS oo si diiran loogu soo dhaweeyey Garoowe+Sawirro
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee Caasimada Dowlada Goboleedka Puntland,ka dib safar shaqo labo maalmood ah ay ku joogi doonaan Garowe.
Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha, Dhalinyarada iyo ciyaaraha puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdullaahi iyo Masuuliyiin ka tirsan Puntland iyo Maamulka Gobolka Nugaal ayaa Wasiir Saalax iyo Wafdiga uu hoggaaminayay kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Konoco, wuxuuna soo dhaweyn ka dib kormeer ku soo maray Garoonka cusub ee loo dhisaayo Caasimada Garowe, waxuuna warfidiyeenka uu uga waramay ujeedada ay u yimaadeen puntland.
Wuxuu sheegay Wasiir Saalax Axmed jaamac inuu aad ugu farax sanyahay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay
“Aniga oo ku hadlaya magaca wafdiga iyo Wasiirada kala duwan ee Shaqada iyo Shaqaalaha Dawlad Goboleeyada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo igu wehliya safarkan waxaa raali ka nahay sida aad inoogu soo dhaweyseen magaalada Garowe ee Caasimada Puntland”. Ayuu yiri Wasiir Saalax.
Dhinaca kale Wasiir Saalax ayaa sheegay in berito uu Garowe ka furmi doono (Shirka dib u Eegista iyo ka wadatashiga Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee L11) oo ay soo diyaarisay wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada dawladda Federaalaka Soomaaliyeed.
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiisyo 200 milyan oo doolar lagu taabbagelinayo (War Saxafadeed)